Lahatsary fanadihadiana 4 sy boky hahalalana ny minimalism | Bezzia
Lahatsary fanadihadiana 4 sy boky hahalalana ny minimalism
Ny fiheverana ny minimalism dia nampiasain'ny filozofa anglisy Richard Wollheim tamin'ny 1965 hamaritana ny fironana ara-javakanto nipoitra ho tsy fitoviana amin'ny zavakanto pop. Saingy io teny io dia nanimba ny sakana ara-javakanto mamaritra ny fomba fiaina iray izay manasa antsika hanaisotra ny tenantsika amin'ireo singa be loatra ary hampihena azy ireo amin'ny zava-dehibe.
Namana bebe kokoa, andraikitra bebe kokoa, vola bebe kokoa, entana ara-nofo bebe kokoa ... Manohitra ny zava-drehetra izay toa manery antsika ny gadona fiainana ankehitriny, mametraka fiainana tsotra sy feno kokoa. Fiainana izay manampy anay hahalala bebe kokoa ireo fanadihadiana sy boky manaraka.
1 Minimalism: ny zava-dehibe
3 Fototra minimalista
4 Tsy ianareo rehetra na ny zava-drehetra anio
Minimalism: ny zava-dehibe
"Minimalismo" dia horonantsary fanadihadiana Joshua Fields Millburn sy Ryan Nicodemus, ideolojista ny hetsika minimalista, mpampianatra, mpitantana ny web theminimalists.com ary mpanoratra boky maro.
Ny fanadihadiana izay «mampiseho ny tombony amin'ny kely kokoa no betsaka amin'ny alàlan'ny fijoroana vavolon'ny olona manohitra ny fanjifana mahery vaika any Etazonia »dia manangona ny fijoroana vavolon'ny manam-pahaizana maro - psikology, neuropsychiatrists, neuropsychologists, ekonomista, mpanoratra… - momba io lohahevitra io rehefa manaraka ireo maherifo tamina fitsidihana hitory ny bokiny ho an'i Etazonia Fanjakana.
Ny minimalism dia fanitarana an'io boky io: Izay sisa rehetra: Fahatsiarovana nataon'i The Minimalists, izay tsy nadika tamin'ny teny Espaniôla. Ahoana raha toa ka tsy izay tena tadiavinao daholo no tadiavinao? Izany no nanjo ireo mpiaro azy sy ny fanontaniana napetraka tao an-tsain'izy ireo ho valiny ary voajanahary, minimalism.
Sambatra ny dia mamakivaky ireo kaontinanta 5 mitady ny lakilen'ny fahasambarana; amin'ny fomba hahitana fifandanjana eo amin'ny fitadiavam-bola, ny fahombiazana ary ny toerana ara-tsosialy, miaraka amin'ny filantsika fifandraisana mahasoa, fahasalamana ary fanatanterahana manokana. Amin'ny alàlan'ny tantaram-piainan'ny olona falifaly sy ny fototry ny Psychology Positif (onjam-pahaizana siantifika izay manadihady ny soa), "Happy" dia manandrana mampiseho ny fomba ahafahantsika hahatratra fiainana feno, salama ary sambatra kokoa.
Avereno ny toeranao ary ankafizo ny fiainanao. Voafetra ny fotoanantsika ary tianay hanana kalitao izany. Mikatsaka fifandanjana sy fitoniana isika, fa isan'andro isan'andro ny fanangonana zavatra dia mety hitarika antsika amin'ny toe-javatra ny adin-tsaina izay manakana antsika tsy hanana fiainana milamina sy sambatra.
Lucia Terol, manam-pahaizana manokana momba ny minimalism sy ny fandaminana, mizara ny zavatra niainany sy torohevitra azo ampiharina marobe mifantoka amin'ny fahazoana mandanjalanja ara-tsaina sy ara-batana. Ao amin'ny Minimalist Essence dia ho hitanao ireo fahazarana mahasalama izay mora ampiharina, namboarina tamin'ny filozofia minimalism, natao hanampiana anao hankafy sy hamela ny tsy fahafaham-po sy ny fiankinan-doha.
Tsy misy fananana zavatra maromaro fa amin'ny fijanonana amin'ireo zavatra ireo, hetsika sy fifandraisana izay taratry ny famirapiratanao sy ny diamondrao. Manazava ny valizinao amin'ny zavatra hafa rehetra, mifandraika amin'ny fahalalahana mihetsika, ny hetsika ary ny fanapahan-kevitra. Mahatsapa ny kitaponao ho mpiara-miasa fa tsy enta-mavesatra. Vonona ny hanana fiainana feno fanatsarana ve ianao?
Tsy ianareo rehetra na ny zava-drehetra anio
Este tsy boky fitantanana fotoana ampiasaina io. Ahoana raha nolazaiko anao fa ny mahatonga anao hampihatra ny vokatrao dia tsy ny fampiasana fotoana mety fa ny sitraponao? Amin'ity fomba fitantanana ity dia fitaovana telo no handamina ny fiainanao amin'ny fanontaniana tsotra telo. Ny fianarana mitantana fotoana dia tsy laharam-pahamehana, fa manome feo ny tanjonao lehibe.
Eo ambanin'ny fomba fanao minimalism, Manolotra drafitra hetsika eo amin'ny fiainanao aho izay manomboka amin'ny fanafoanana ny lalimoanao, fanatsarana ny sakafonao, fanatsorana ny tranonao ary fametrahana fifandraisana matanjaka amin'ireo izay tena manandanja ny fiainanao.
Efa nahita na namaky ny iray amin'ireo fanadihadiana na boky ireo ve ianao? Tsy mila mamaky ianareo rehetra, na ny zava-drehetra anio. Soa ihany aho fa nahita ny Minimalism taloha elabe ary tsy afaka mitsahatra ny manome izany aho. Raha ny momba an'i Lucia Terol, azoko atao ny manome toky anao fa mandeha tsara ny fandaharany raha tianao ny hiasan'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Lahatsary fanadihadiana 4 sy boky hahalalana ny minimalism
Ahoana no manapaka bangs misokatra
Zavatra 5 tsy avela amin'ny fifandraisana